Ihe ịtụnanya ndị ọzọ na Etihad Airways: VP Vijay Poonoosamy kpọrọ ya ka ọ kwụsị
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Ihe ịtụnanya ndị ọzọ na Etihad Airways: VP Vijay Poonoosamy kpọrọ ya ka ọ kwụsị
Vijay Poonoosamy abụrụla olu Abu Dhabi nke Etihad Airways gbara Onye isi oche nke International Affairs. A hụla Vijay na ogwe, dị ka ọkà okwu na isi njem na njem metụtara ihe omume. A na-ele ya anya dịka ọkachamara a pụrụ ịdabere na ya ma hụ ya dịka njikọ dị n'etiti ụlọ ọrụ ụgbọelu na njem ndị ọzọ na njem.
Etihad Airways, onye na-ebu mba United Arab Emirates nọ na-agabiga oge siri ike mgbe nnukwu ego Alitalia na ntinye ụgbọelu na-atụgharị obi wee nye aka nnukwu mbibi maka ụgbọelu ahụ. Nke a mere n'okpuru nduzi nke onye isi oche Australia bụ James Hogan onye a manyere ịhapụ arụkwaghịm na 2017 ma bizi na Switzerland. Vijay so na ndị otu dị n'ime ya na Hogan.
N'ụzọ dị ịtụnanya taa Mr Poonoosamy kwupụtara na ọ na-ahapụ ụgbọ elu. Maazị Poonoosamy agaghị ekwu ihe kpatara ya na ihe kpaliri ya ịgba arụkwaghịm.
O nyere ndị enyi ya, ndị ọrụ ibe ya, na ndị na-akwado ya akwụkwọ ozi a taa:
Enwere ya na obi agwakọtara mana obi na-atọ m ụtọ na m ga-ahapụ Etihad na njedebe nke afọ.
Achọtala m ihe karịrị afọ 12 ka Etihad kacha nwee nsogbu na afọ ojuju. I mekwara ka ha bụrụ ihe kwesịrị ncheta.
Agwara m na m kwesịrị inwe nnukwu nganga maka ọrụ m maka Etihad, Abu Dhabi na UAE gụnyere inye aka ịnwe ikike ikike okporo ụzọ bara uru maka Etihad iji bulie netwọkụ ya, nwere mwakpo nke ndị isi atọ ndị US buru ibu, na-agbagha ịjụ ọtụtụ ndị Ndị ọrụ gọọmentị German jikọtara anyị koodu ikuku berlin, nkwado usoro iwu kwadoro maka itinye ego anyị na Jet Airways ma dozie esemokwu dị iche iche na gọọmentị n'ụwa niile. Otu maka nkwekọrịta m kachasị elu na ICAO, UNWTO, IATA, ACI, WEF, EU, WTTC na USTA yana ahọpụtara onye isi oche nke Hamis Air Transport Organisation nke Montreal, bụ onye ndị otu ya bụ ndị amara ndị isi ụgbọ elu ụwa, na ịbụ naanị Onye isi ụgbọelu na-abụghị US na Board nke Washington International International Club.
A ga m ahapụ ezumike malite na 10 Disemba.
Eji m ohere a na-ekele gị na ndị ị hụrụ n’anya oge Wonderful Festive Season and a Happy and Healthy 2018.
Na echiche kacha mma, dị ka mgbe niile.
Onye isi oche nke International Affairs
Vijay Poonoosamy, onye mba Mauritius, bụ onye ọka ikpe (Middle Temple) nwere nzere iwu na Mahadum Nottingham, nzere masters na International Law si London School of Economics and Political Science, Post Graduate Diploma in Air & Space Law site na London Institute of World Affairs na Asambodo na Ntụziaka Companylọ Ọrụ site na Institute of Directors na New Zealand.
Vijay bụ Director International Affairs nke QI Group. Ọ bụ onye isi oche nke Hamis Air Transport Club na onye otu World Economic Forum nke Global Future Council na Mbugharị, World Travel & Tourism Council Advisors Circle, World Routes Advisory Panel, Board of Directors of US Travel Association, the Board of Gọvanọ nke International Aviation Club nke Washington, DC, na Advisory Board nke World Tourism Forum Lucerne.
Vijay bụ onye ọka iwu na ọdụ ụgbọelu na London, onye isi nchịkwa nke Air Mauritius, onye isi oche nke ọdụ ụgbọ elu nke Mauritius na onye isi oche nke International Affairs nke Etihad Aviation Group (rue 10 Disemba 2017).
Vijay bụ onye isi oche nke ICAO 1994 International Conference Conference, ICAO Rapporteur na Onye isi oche nke 1999 ICAO Special Group na Modernization nke Warsaw Convention, osote onye isi oche nke Kọmitii Pụrụ Iche ICAO nke 2009 na Mgbakọ Nche Nchebe na Onye njikwa na Eprel 2012 Nzukọ ICAO Air Transport Symposium, Mgbakọ nke ICAO Pre-Air Transport Conference Symposium, Machị 2013 ICAO Nzuko maka mmepe na-adigide nke njem ụgbọelu na Africa na ICAO ICAN Symposia nke 2015, 2009, 2010 na 2011.
Vijay bụkwa onye isi oche nke Kọmitii Transportgbọ njem nke Kọmitii Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu nke Africa, Onye isi oche nke Kọmitii Mmekọrịta IATA, Onyeisi nke Council Advisory Council IATA na Onyeisi nke IATA Task Force on International Aviation Issues.